ဒီနည်းလမ်း(၄)သွယ်ကို အသုံးပြုပြီး ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ် - CeleLove
ဒီနည်းလမ်း(၄)သွယ်ကို အသုံးပြုပြီး ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်
May 12, 2019 Cele Love ဘ၀နှင့်အချစ် 0
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို (သူကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်ရပဲ)ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ပျိုမေတို့ကို ပြောပြ ပေး ချင်ပါတယ်။ဒါဟာအမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဖြစ်ပါ တယ် ……….။
(၁) ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်း ”
ယောက်ျားတော်တော်များက စိတ်ဆိုးလာရင် ဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်လေ့ရှိပြီး အတွင်းစိတ်ကို မျိုးသိပ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း အရမ်းကိုနည်းပါးတတ်ပေမယ့် အမျိုး သမီးတွေကတော့ ဒါနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။ဆိတ်ဆိတ်နေလိုက်တာ ဟာ သုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။တော်လိုက်ရအောင်၊ ဆက်မပြော ပဲနေရအောင်၊ခဏလောက်ခွဲနေရအောင် ဒီလိုစကားတွေကို အမျိုးသမီးတွေ က ပြောတိုင်း အမျိုးသားတွေစိတ်ထဲမှာ တွေးမိတာက” ဘာလဲ၊ငါဘာလုပ်မိ လို့လဲ “ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပါ။တခါတလေမှာ ကိုယ်ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့ အိုးမလုံအုံပွင့်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့အမှားတွေကိုပါ မစစ်လိုက်ရပဲ အလိုလိုပွင့်ထွက်လာ တတ်ပါတယ် …။
(၂) ကလေးလိုဆက်ဆံပါ ”
ယောက်ျားတွေဟာ တခါတလေမှာ ကလေးတစ်ယောက်လို ပြုမူတက်ပါ သလား? သေချာပါတယ် လုပ်ဖူးမှာပါ။ကလေးတစ်ယောက်လို အပြုအမူတွေ ကို ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆီမှာတွေ့ရင် မိန်းမတွေက မချင့်မရဲအမူအယာမျိုးနဲ့ တုံ့ပြန်လေ့ရှိပါတယ်။တကယ်တော့ ဒီလိုအခြေအနေမှာ လက်ကမ်းဖေးမပြီး၊ အမေလို၊အမလိုပုံမျိုးနဲ့ တုံ့ပြန်ဆက်ဆံပေးရမှာပါ။ဒါကြောင့် တစ်ယောက်တည်း သူလုပ်ချင်ရာလုပ်ပါစေဆိုပြီး လွှတ်ထားတာမျိုးမလုပ်ပဲ သူလုပ်သမျှအရာတိုင်းမှာ အမြဲဝင်ပါပါ။၀င်လုပ်ပေးပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲ သူကိုယ့်အပေါ်မှီခိုတဲ့အရာတွေ များလာ ပါစေ။နောက်ဆုံး ကိုယ်မရှိရင် ကောင်းကောင်းမ လုပ်တတ်ဘူး။အဆင်မပြေနိုင် ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး သူ့စိတ်ထဲမှာ ၀င်သွားပါလိမ့်မယ် …။
ဒါကလည်း ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ဒီသဘောတရားကတော့ သား၊သမီးဖြစ်သူ စာလုပ်ချင်လာအောင် တစ်ဖက်အိမ်က ကလေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြောတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ သူ့ရဲ့မခံချင် စိတ်ကို မသိမသာဆွပေးပြီး ကြိုးစားချင်လာအောင် သိမ်းသွင်းတဲ့နည်းပါ။တစ်ခုရှိ တာက နားဝင်ချိုတဲ့စကားလှလှလေးနဲ့ပြောပေးဖို့လိုပြီး၊အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ ဒီလူက ရှင့်ထက် အများကြီး သာတယ် လို့တိုက်ရိုက်ကြီးသွားပြောလိုက်ရင်တော့ သူ့မာနကိုထိပါးသလိုဖြစ်ပြီး၊အဲ့ဒီလူကို ပြသာနာသွားရှာ၊ ရန်ပွဲတွေဖြစ်ကုန်တဲ့ အထိအခြေအနေပြင်းထန် သွားနိုင်တာမို့ဒီနည်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင် သေချာပေါက် နားဝင်ချိုတဲ့စကားလုံးမျိုး နဲ့ရွေး ပြောပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် …။
ဒါလည်းအသုံးဝင်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုပါပဲ။ယောက်ျားတော်တော်များများကို ဒီနည်းနဲ့ ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်။စကားချိုချိုလေးတွေနဲ့ခခယနဲ့မျက်နှာချိုသွေးပြောတဲ့ စကားလုံးကို ရှောင်နိုင်တဲ့ ယောက်ျား အင်မတန်ရှားပါတယ်။(ဥပမာ-ဟန်နီရေ ကျမကနည်းပညာပိုင်းသိပ်မသိဘူး.ကျမအတွက် ဒီရီမုဒ်ကို ရှာပေးနိုင်မလား) စတဲ့စကားလုံးလှလှလေးမျိုးပါ။မြှောက်ပင့်တဲ့စကားလေးကို ခခယယနဲ့ပြော လိုက်ရင်တော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာကို သူလုပ်ပေးလာအောင် သေချာပေါက် စည်းရုံးပြောဆိုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
ဒီနညျးလမျး(၄)သှယျကို အသုံးပွုပွီး ယောကျြားတဈယောကျကို ခြုပျကိုငျနိုငျပါတယျ
ယောကျြားတဈယောကျကို (သူကိုယျတိုငျတောငျ မသိလိုကျရပဲ)ဘယျလို ကိုငျတှယျထိနျးခြုပျရမလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးလေးတှကေို ပြိုမတေို့ကို ပွောပွ ပေး ခငျြပါတယျ။ဒါဟာအမြိုးသမီးတိုငျး သိထားသငျ့တဲ့ နညျးလမျးလေးတှေ ဖွဈပါ တယျ ……….။
(၁) ဆိတျဆိတျနခွေငျး ”
ယောကျြားတျောတျောမြားက စိတျဆိုးလာရငျ ဒေါသတကွီးတုံ့ပွနျလရှေိ့ပွီး အတှငျးစိတျကို မြိုးသိပျထိနျးခြုပျနိုငျစှမျး အရမျးကိုနညျးပါးတတျပမေယျ့ အမြိုး သမီးတှကေတော့ ဒါနဲ့လုံးဝဆနျ့ကငျြဘကျပါ။ဆိတျဆိတျနလေိုကျတာ ဟာ သုံးဝငျတဲ့နညျးလမျးတှထေဲက တဈခုပါ။တျောလိုကျရအောငျ၊ ဆကျမပွော ပဲနရေအောငျ၊ခဏလောကျခှဲနရေအောငျ ဒီလိုစကားတှကေို အမြိုးသမီးတှေ က ပွောတိုငျး အမြိုးသားတှစေိတျထဲမှာ တှေးမိတာက” ဘာလဲ၊ငါဘာလုပျမိ လို့လဲ “ဆိုတဲ့အတှေးမြိုးပါ။တခါတလမှော ကိုယျဒီလိုပွောလိုကျတာနဲ့ အိုးမလုံအုံပှငျ့ဖွဈပွီး သူ့ရဲ့အမှားတှကေိုပါ မစဈလိုကျရပဲ အလိုလိုပှငျ့ထှကျလာ တတျပါတယျ …။
(၂) ကလေးလိုဆကျဆံပါ ”
ယောကျြားတှဟော တခါတလမှော ကလေးတဈယောကျလို ပွုမူတကျပါ သလား? သခြောပါတယျ လုပျဖူးမှာပါ။ကလေးတဈယောကျလို အပွုအမူတှေ ကို ယောကျြားတဈယောကျဆီမှာတှရေ့ငျ မိနျးမတှကေ မခငျြ့မရဲအမူအယာမြိုးနဲ့ တုံ့ပွနျလရှေိ့ပါတယျ။တကယျတော့ ဒီလိုအခွအေနမှော လကျကမျးဖေးမပွီး၊ အမလေို၊အမလိုပုံမြိုးနဲ့ တုံ့ပွနျဆကျဆံပေးရမှာပါ။ဒါကွောငျ့ တဈယောကျတညျး သူလုပျခငျြရာလုပျပါစဆေိုပွီး လှတျထားတာမြိုးမလုပျပဲ သူလုပျသမြှအရာတိုငျးမှာ အမွဲဝငျပါပါ။ဝငျလုပျပေးပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲ သူကိုယျ့အပျေါမှီခိုတဲ့အရာတှေ မြားလာ ပါစေ။နောကျဆုံး ကိုယျမရှိရငျ ကောငျးကောငျးမ လုပျတတျဘူး။အဆငျမပွနေိုငျ ဘူးဆိုတဲ့ အတှေးမြိုး သူ့စိတျထဲမှာ ဝငျသှားပါလိမျ့မယျ …။
ဒါကလညျး ယောကျြားတဈယောကျကို ထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှထေဲက တဈခုပါ။ဒီသဘောတရားကတော့ သား၊သမီးဖွဈသူ စာလုပျခငျြလာအောငျ တဈဖကျအိမျက ကလေးနဲ့နှိုငျးယှဉျပွောတဲ့ပုံမြိုးနဲ့ဆငျတူပါတယျ။ သူ့ရဲ့မခံခငျြ စိတျကို မသိမသာဆှပေးပွီး ကွိုးစားခငျြလာအောငျ သိမျးသှငျးတဲ့နညျးပါ။တဈခုရှိ တာက နားဝငျခြိုတဲ့စကားလှလှလေးနဲ့ပွောပေးဖို့လိုပွီး၊အဲ့လိုမဟုတျပဲ ဒီလူက ရှငျ့ထကျ အမြားကွီး သာတယျ လို့တိုကျရိုကျကွီးသှားပွောလိုကျရငျတော့ သူ့မာနကိုထိပါးသလိုဖွဈပွီး၊အဲ့ဒီလူကို ပွသာနာသှားရှာ၊ ရနျပှဲတှဖွေဈကုနျတဲ့ အထိအခွအေနပွေငျးထနျ သှားနိုငျတာမို့ဒီနညျးကိုသုံးမယျဆိုရငျ သခြောပေါကျ နားဝငျခြိုတဲ့စကားလုံးမြိုး နဲ့ရှေး ပွောပေးဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ …။
ဒါလညျးအသုံးဝငျတဲ့ လကျနကျတဈခုပါပဲ။ယောကျြားတျောတျောမြားမြားကို ဒီနညျးနဲ့ ထိနျးခြုပျလို့ရပါတယျ။စကားခြိုခြိုလေးတှနေဲ့ခခယနဲ့မကျြနှာခြိုသှေးပွောတဲ့ စကားလုံးကို ရှောငျနိုငျတဲ့ ယောကျြား အငျမတနျရှားပါတယျ။(ဥပမာ-ဟနျနီရေ ကမြကနညျးပညာပိုငျးသိပျမသိဘူး.ကမြအတှကျ ဒီရီမုဒျကို ရှာပေးနိုငျမလား) စတဲ့စကားလုံးလှလှလေးမြိုးပါ။မွှောကျပငျ့တဲ့စကားလေးကို ခခယယနဲ့ပွော လိုကျရငျတော့ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ အရာကို သူလုပျပေးလာအောငျ သခြောပေါကျ စညျးရုံးပွောဆိုနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ …။
FA တွေ (၇) ရက်အတွင်း ချစ်သူရစေမယ့် အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်း(၇)မျိုး